Howlgalka xasilinta caasimadda muqdisho oo markii ugu horeysay xalay lagu qabtay sargaal sare oo alshabaab ka tirsan | Kismaayo24 News Agency
Howlgalka xasilinta caasimadda muqdisho oo markii ugu horeysay xalay lagu qabtay sargaal sare oo alshabaab ka tirsan
Friday June 2, 2017 - 8:22 under Somali News by Tifaftiraha K24
Ciidamada ammaanka ee loo xilsaaran xasilinta caasimadda muqdisho ayaa xalay waxa ay howlgallo ka sameeyeen qeybo kamid ah dagmooyinka gobolka banaadir.
Howlgallada waxaa laga sameeyay dagmooyinka wadajir iyo dharkeenley ee gobolka banaadir waxaana lagu soo qab qabtay tiro dad ah.
Ciidamada howlgalka xasilinta muqdisho ayaa guri guri u galaayay dagmooyinka howlgallada laga sameeyay waxaana lagu soo qabtay dad ku dhaw 200 oo ruux.
Ciidamada ayaa baaritaan iyo isku shaandheyn ku sameeyay dadkii howlgalka lagu soo qab qabtay waxaana lasii daayay inta badan dadkii lasoo qab qabtay markii laga reebay inyar oo saraakiisha ay sheegeen in baaritaano dheeraad ah lagu sameyn doono oo hey’addaha ammaanka loo gudbin doono.
Saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalkii xalay lagu qabtay sargaal sare oo alshabaab ka tirsan kaasi oo ku dhuumaaleysanaayay dagmooyinka howlgalka laga sameeyay mana jirto xog dheeraad ah oo laga helay sargaalkaan xalay la qabtay magaciisa iyo howsha uu shabaabka u haayay.
Saraakiisha waxa ay ka gaabsadeen in ay faah faahin ka bixiyaan sargaalkaan xalay la qabtay waxaana ay sheegeen in hey’addaha ammaanka loo gudbiyay si baaritaano loogu sameeyay.
Howlgalka xasilinta caasimadda muqdisho ayaa isugu jira hub ka dhigis baaritaan waxaana madaxweyne farmaajo uu amar ku bixiyay cid kastoo loo arko in ay carqalad ku tahay amniga caasimadda in gacan bir ah lagu qabto.